ISt. Martin ikhanya kwiVeki yeCaribbean yeCVO kwisiXeko saseNew York
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » ISt. Martin ikhanya kwiVeki yeCaribbean yeCVO kwisiXeko saseNew York
Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • Iindaba zaseSt • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Umbutho weCaribbean Tourism Organisation, (CTO) weVeki yeCaribbean eNew York ngowona msebenzi mkhulu wokhenketho lwengingqi eMntla Melika. Amagcisa, abapheki abadumileyo, abatyali mali kunye namanye amahlakani acwangcisiweyo ajoyina amagosa aseburhulumenteni kunye namajelo eendaba kangangeveki yemibhiyozo eyilelwe ukukhuthaza lommandla kunye neenkokheli zokhenketho, ukuqhuba iintlanganiso ezimalunga ne-bi-lateral kwishishini.
Ngokunxulumene noku, u-Hon. UValérie Damaseau wayezimase iNdibano yeBhodi yaBalawuli ye-CTO, iBhunga labaPhathiswa bezoKhenketho kunye neNtlanganiso yeKomishinala, kunye neNkomfa yeNtengiso eyayibanjwe ngamaLungu aManyeneyo e-CTO, athi thaca iindlela zentengiso zakutshanje. Ngexesha leesemina kunye nezinye iintlanganiso zophuhliso loshishino uMphathiswa uDamaseau waphakamisa ulwazi ngemveliso yezokhenketho yaseSt.Martin kwaye wanika uhlaziyo olubalulekileyo ukuphucula indawo ekuyiwa kuyo.
Kwindawo yentengiso yemedia, abameli baseSt.Martin babe nethuba lokuxoxa ngohlaziyo lwendawo ekuyiwa kuyo nabarhwebi kunye nemithombo yeendaba yabathengi kunye nokwabelana ngolwazi malunga nokwenzekayo kwesi siqithi, besabelana ngokuba iipesenti ezingama-75 zeehotele sele zivuliwe, ezinamagumbi ayi-1,200, ngelixa amanye angama-65 Ipesenti yendawo yokuhlala ihlaziyiwe. I-St. Martin ibone ukunyuka okumangalisayo nge-118% yenani labo bafikayo kwinyanga kaJanuwari 2019. NgoJanuwari 2018, esi siqithi samkela iindwendwe ezili-12,028 kwaye elo nani liphindaphindwe kabini, lafikelela kubakhenkethi abangama-26,258 ngowama-2019.
Hon. UValérie Damaseau uthathe inxaxheba kudliwanondlebe lomntu ngamnye kunye namajelo eendaba akhethiweyo kunye neentatheli zikamabonakude. Ethetha namajelo eendaba, uMphathiswa uthe, “Ndingathanda ukuvuyisana neqela lethu kwi-Ofisi yezoKhenketho yaseSt. Ukuthatha inxaxheba kwezi ntlanganiso kusivumela ukuba sinxibelelane, sitshintshiselane ngezimvo, kwaye sincede ekuqinisekiseni ukuba unyaka onempumelelo kushishino lokhenketho ”. Uqhubeke wathi, 'Impumelelo ivela ekusebenzeni nzima kungoko sizakuhlala sizimisela ukuqinisekisa ukuba umfutho wokufika kwabahambi uyaqhubeka ”. Ukwabonelele ngolwazi malunga neempawu ezintsha eziza kwindawo ekuza kufika kuyo ngo-2020 nango-2021 ezinjengeeNdawo zokuHlala eziFihlakeleyo, iPlanethi yaseHollywood kunye neMorgan.
Ngeevenkile ezingenamsebenzi, uluhlu lokutyela lwe-eclectic, iipropathi kunye nemidlalo emininzi yamanzi, iSt.Martin yenzelwe abakhenkethi abajolise kwizenzo. Ngomdibaniso wawo wokubuk 'iindwendwe kunye nesimbo saseYurophu, iSt. Martin yenye yeendawo ezinomdla kakhulu kwiCaribbean. Indawo ekuyiwa kuyo inika iindwendwe ithuba lokufumana iilwandle ezintle, ukutya ukutya okuqhelekileyo kwesiFrentshi kunye neNtshona Indiya, kunye nokuphonononga uninzi lwezinto ezinomtsalane.
Ukufumana ulwazi ngeSt. Martin nceda undwendwele: https://www.st-martin.org/ okanye ulandele
I-Instagram: @discoversaintmartin Twitter @ilesaintmartin
iimveliso Uphuhliso lwamashishini Caribbean caribbean tourism Umbutho woKhenketho kwiCaribbean Caribbean Week Uboniso abapheki abadumileyo abapheki eza umsebenzi inamalungu Nkomfa qhubeka qhubeka kwibhunga luleke I-CTO ukupheka ukusika yenzelwe uphuhliso ba lawuli Xoxa msebenzi Akulayishwa Umda aseYurophu utshintshiselwano Kuhlola Facebook imithendeleko fumana landela French amagosa karhulumente isiqinisekiso lukhuni hollywood Mhlekazi izimvo umxhelo Indian Instagram udliwano abatyali uJanuwari Ujoyine intatheli zakutshanje iinkokheli yembutho Martin eendaba umhlangano Ntla nganiso amalungu ngumphathiswa abaphathiswa ngesantya ngenyanga womnatha Inew york City New York Mantla amantla Emelika unika iofisi Ngamagosa ithuba Ntlangano Iivenkile nabo iplanethi zisiwe imveliso Khuthaza khuthaza iipropati khuliswe kwingingqi Regional tourism ivuliwe kwakhona zokulala zokutyela amagumbi imfihlelo iisemina isabelo ukwabelana kwiivenkile zemidlalo mabala St St. Martin buchule style impumelelo yimpumelelo kumabonakude kwiCaribbean Isiqithi UMphathiswa Ummandla lilonke Icandelo lezoKhenketho iinkokheli zokhenketho abaphathiswa bezokhenketho imveliso yokhenketho iofisi yabakhenkethi trade Zemveli ekwizinga twitter uhlaziyo ba liholide iivillas undwendwe Ukufika kweendwendwe amanzi imidlalo yamanzi Iveki samkela Bucala ngasekunene York KwiSixeko saseYork